> Resource > Mac > Ashampoo u Mac DVD Gubidda Software | Free Download
Ashampoo waa shirkad software computer caalamiga ah ee ku salaysan in Oldenburg, Germany. Inkasta oo aan sida caanka ah sida Ashampoo WinOptimizer, Ashampoo Gubidda Studio waa mid ka mid ah kale ugu-loo isticmaalaa in lagu Nero Gubidda ROM ee Windows - DVD kale wax soo saarka shirkadaha Germany gubanaya. Laakiin labada Ashampoo Gubidda Studio iyo Nero ayaa sii daayo version Mac barnaamijka. Ma doonaysaa ah Ashampoo Gubidda Studio for Mac ama Nero u Mac?
Our talo waa Wondershare DVD Creator for Mac . Waa barnaamij fudud oo degdeg Mac DVD gubanaya wixii video inay DVD abuurka. Waa in DVDs badalo karaa videos ka videos caanka ah sida AVI, Mpg, MPEG, MP4, wmv, MOV, MKV, FLV, iwm la DVD bedeley qurux badan. Ka sokow, tan gubi Ashampoo for kale Mac kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo duubey la kala guurka iyo edit videos sida goo, dalagga, isku shaandheyn, iwm Marka loo eego Ashampoo Gubidda Studio, DVD Creator for Mac yimaado la interface user-friendly ah si aad si DVD gubi karaa video waqti. Just raac tilmaan fudud ee hoose si ay u gubaan kasta video inay DVD dadaal lahayn.
1 dar video / sawir files
Markii barnaamijka DVD gubashadii furmay, waxaad dooran kartaa in la abuuro mashruuc cusub ama la furo mashruuca ah ee hadda jira. Halkan waxaan ku dooro "Abuur Project New a". Oo daaqadahooda hoose ku tusi doonaa sida hoos ku qoran. Waxaa waxaad ku dari kartaa files warbaahinta adigoo gujinaya "+" button, ama si fudud u jiidi videos ama sawiro ka sahamisa file barnaamijka.
Fiiro gaar ah : Si aad slideshow sawir, waa in aad xulan sawiro badan by haysta hoos Command ama wareeg oo muhiim ah oo ka dibna u samaysaa saldhigyo slideshow ay ka mid yihiin guurka, muddada, caption, music soo jeeda, iwm Waxaad kartaa sidoo kale koox yar videos / wada duubey si ay u abuuraan ah cutubka ka muuqan DVD menu. Haddii aad rabto in aad ka kaxeeyo kooxda, jiidi clip ka soo Murayaad ilaa muuqataa line buluug ah.
2 Edit video / sawir files (Ikhtiyaar)
Kala duwaan ka mid ah qalabka tafatirka waxay ku jiraan Ashampoo kale Gubasho u Mac, oo ay ku jiraan Dalag, isku beddesha, goo, watermark, Raadka, iwm Iyada oo qalabka, aad isla edit karaa files warbaahinta si fudud oo dhaqso. In sidaa la yeelo, dooro video ah oo guji "Edit" badhanka si aad u bilowdo.
3 Samee menu DVD DVD ah (Ikhtiyaar)
Ashampoo Gubidda for kale Mac hayaa wax badan oo ka mid ah si fiican loo qorsheeyay arrimo menu DVD. Doorashada ka mid ka mid ah, waxaad si fudud u abuuri karaan raadinaya wanaagsan menu DVD waqti. Sidoo kale beddelo thumbnail ee cutubka iyo jir, background image, music soo jeeda, style button, iwm si ay u astaysto. Haddii aadan u baahnayn menu ah, kaliya dooro "Menu No". Dhammaan clips waxaa la ciyaari doonaa mid mid sida ay isugu xigaan go'aansatay uu furmo suuqa hoose.
4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo bilaabaan in ay gubi DVD
Riix ah "Kulanka Xiisaha Leh" badhanka si ay u arkaan sida idil DVD movie eegi doonaa sida. Ugu dambeyntii, geliso DVD disc maran in aad DVD gubi oo guji "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya DVD disc la Ashampoo this Gubasho u Mac codsi kale.
Auto riixo: Haddii mashruuca DVD aad ka ballaaran yahay 4.7G, laakiin aadan haysan disc ah DVD9 (7.9g) on ​​gacanta, kaliya geliso disc DVD5 ah, codsiga si toos ah ugama noqon doonaa filimaan aad u haboon disc DVD5 ah (4.7G ).